musha nyika dzakabatana Singers J Cole Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu J Cole Biography inokuudza chokwadi nezve yake Yehudiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Kay Cole), Mhuri, Mukoma (Zach), Mudzimai (Melissa Heholt). Zvikuru, Mararamiro aJ. Cole, Hupenyu hweMunhu uye Networth.
Iyo account ine Concise Nhoroondo yeMumhanzi Icon akakura asina baba uye achinetseka ari ega. Tinotanga Nyaya yake kubva kumwana muNorth Carolina kusvika kumuimbi awana hukuru hwenyika pachikuva.
Kumutsa zvishuwo zvako zvehupenyu hwehupenyu hunonakidza hweJ. Cole's Biography, tinopa kwauri Hupenyu hwake hwepakutanga uye Rise gallery. Iyo foto archive pazasi inopfupisa Rwendo rwake rwemimhanzi.
Rwekutanga uye Kusimuka Rwendo rweJ Cole. Kubva kumwana ane Ziso Rakafara kusvika kuMuimbi Anokunda Grammy.
Pasinei nekuzivikanwa uye mibairo kune zita rake, zvisinei, vashoma chete vanoda mimhanzi vane ruzivo rwakakwana rweJ Cole's Biography. Nekuda kweizvozvo, takagadzirira chidimbu ichi kuti ushandise. Pakarepo, ngatitangei.
J Cole Childhood Nyaya:
Mufananidzo Wakakosha Wehudiki J. Cole Nemaziso Ake Akanaka Anobvunza Anopenya Anopenya.
Kune vateveri veAutobiography, ane zita remadunhurirwa rekuti “J. Cole ", akaberekwa musi we 28th waJanuary, 1985, kuna amai vake, Kay Cole, mune imwe nzvimbo yeuto muWest Germany.
Muimbi weAmerica ndiye gotwe pavana vaviri vari mumubatanidzwa pakati pevabereki vake. Kunyangwe isu tisina mufananidzo wababa vake, mufananidzo waAmai vaJ Cole (Kay Cole) unoonekwa pano - nekunyemwerera kwavo kunofadza kunofadza moyo.
Sangana naAmai vaJ Cole, Kay Cole. Ari pamufananidzo pamwe chete nevana vake vaviri. Unogona Kuziva mudiki J. Cole?
Mushure mekunge murume wake asiya mhuri, Kay Cole nevana vakatama kubva kuFrankfurt kuenda kuFayetteville, North Carolina. Amai vaJ Cole vakazvitora kuti vatarisire zvinodiwa nevana vavo.
Zvinoenderana nedata rehutsotsi kubva kuFederal Bureau of Investigation, Fayetteville (uko J Cole akakurira) ane 77% yeAvhareji Mhosva muUnited States. Saka achiri mukomana, Kay (Amai vaJ Cole) akave nechokwadi chekuti vakomana vake vagare kure nehutsotsi.
J Cole's New Childhood Imba:
Mukushaikwa kwaBaba vevana, Kay Cole akaroorazve Edward. Mushure memuchato, anofambisa vana vake (J Cole naZach) kune imwe nzvimbo inonakidza yeFayetteville, Forest Hills Drive.
Zvirinani, rapper weramangwana aive neimba yekurara yekuteerera nekunyora mimhanzi yake ega.
Kudongorera Kumba kwaJ. Cole paSango Hills Kwaaive neNyaradzo neKuvanzika.
Pamwe chete, iyi imba yemhuri itsva yakanga isina mifaro youduku, sezvo murume mutsva waKay, Edward, akanga akapindwa muropa nezvinodhaka. Sezvineiwo akabva apindawo.
Zvisinei, zvinofadza kuti J. Cole akanga asiri oga. Zach, mukoma wake mukuru, aigara aripo semufambidzani uye waatamba naye - kunyanya paakanga asiri mumhanzi nebasketball.
Hama Zach Cole naJ. Cole seVadiki.
J Cole Mhuri Background:
Baba vake vasati vaenda, imba yake yakanga yakagadzikana. Izvi zvinodaro nekuti Baba vaJ Cole vaive mauto muUS Army. Nemubhadharo wakanaka waibva kuhurumende yeUnited States, paiva nemari yokutarisira mhuri.
Pakupedzisira, mamiriro ezvemari akachinja apo kutsvedza kwakaitika. Amai vaJ Cole (Kay Cole) akanga ari oga kuti aite zvinodiwa zvake nemukoma wake (Zack).
Kuti awane chouviri, Kay akashanda somuposita kuUnited States Office Office. Izvozvo zvakabatsira kuderedza kuoma. Nekubhadhara kushoma kunobva kubasa, chimiro chemhuri yaJ Cole chakange chadzikira - zvichienzaniswa nenguva iyo Baba vake Vemauto vaivepo.
Kunyangwe Kay Cole akaroorazve, hazvina kusimudza mamiriro emari emhuri. Pane kudaro, vakawedzera kupinda mumamiriro avo ehupfumi - kunyange kurasikirwa nekugara kwavo kutsva.
Mhuri yaJ Cole Kwakabva:
Kududzira madzitateguru emuimbi uyu kunonetsa nekuda kwechitarisiko chake, kunyanya panguva yekunyorwa. Bvudzi raJ. Cole rakakiyiwa rakajairwa pakati peNatives of Jamaica, saka unofunga kuti muJamaican.
Mavambo eGermany neAmerica eMunyori weNziyo J. Cole.
Asi pane zvinopesana, dzinza raamai vake (Kay Cole) iEuropean American, kunyanya German. Uye madzitateguru ababa vake ndiAfrica American. Nokudaro, J. Cole ane marudzi maviri, hafu yeGermany neAmerica.
J Cole Dzidzo:
Rapper uyu alumnus weTerry Sanford High School. J Cole akanga ari mudzidzi akajeka - kare ikako kuchikoro. Akapedza chikoro chesekondari aine 4.2 GPA, chiitiko chakamupa mubairo webhezari kubva kuSt. Johns University, New York.
Kuita kwake muchikoro kunoita kuti mhuri yaJ. Cole idade uye inorumbidzwa. Pamusoro pazvo, nharaunda nemusha waakakurira zvakanga zvisina kugadzikana uye zvaisaita mwana.
Terry Sanford Senior High Chikoro uko J. Cole Anosiya Rekodhi seMudzidzi Akapenya.
Mukoreji, sarudzo yake yekutanga seMajor yaive Computer Science. Zvisinei, J. Cole akachinja kuKukurukurirana uye Bhizinesi nokuti akanzwa asina kugadzikana nehupenyu hwakasurukirwa hwemumwe wevadzidzisi vake veComputer. Uye pakupedzisira, takazviona kusvika kumagumo.
Mudiki Akapedza Kudzidza paKupemberera kwake Kubudirira. Unogona kuona J. Cole?
Zvakadaro, mishumo inoratidza kuti bookworm J. Cole akapedza kudzidza naMagna cum Laude. Zvinoreva kuti akakunda nemisiyano yakakosha, GPA ye3.8.
J Cole Music Nyaya - Kubva Pamazuva Ekutanga:
Mukomana uyu akatanga kuonana nemimhanzi yerap kuburikidza nekopi yababa vake vokurera (Edward) ye“2Pacalypse Now.” Iyo album yakatungamirira kukuda kwakadzika kweTupac, uye J. Cole akaongorora zvakare Jay-Z, The Notorious BIG nevamwe vakati wandei.
2Pacalypse Now Album, Yakakurudzira Rudo rwaJ. Cole rweMumhanzi weRap.
Kubva pakuda mumhanzi werap, aishuvira kugadzira rhymes. Mukana wakapenya pana J. Cole apo Muzukuru wake paakapedza zhizha naye, achimuratidza nheyo dzerhythm.
Semudzidzi anomhanya uye mukomana akajeka, Cole akatyaira akananga kukudzidzira, achinyora mubhuku rake rekunyorera. Sezvo muimbi achida mabhiti kuti aite mimhanzi, J. Cole akanga asina mabhiti akazova chimwe chipingamupinyi.
Akatsunga kuti atore mabheti ake, akateterera uye akabhejera Amai vake (Kay Cole) kuti vatenge sampler yemumhanzi weASR-X. Neraki, akabvuma mushure mekukanganisika kwakati wandei pamisasa, zvipo zvekuzvarwa, nezvimwe.
Saka, akashongedzerwa nemugadziri wake wekurova, akapedza nguva achizvigadzirira manzwi nenziyo. Pazasi pane mufananidzo wekuti J. Cole's first beat instrument inoita sei.
Mufananidzo Usingawanzoitiki weAXR Sampler Yakatengwa naKay Cole, Iyo Inodhura J. Cole Mazuva ake ekuzvarwa, Kembi, nezvimwe.
J Cole Biography - Mugwagwa weMukurumbira Nyaya:
Mushure meKoreji yake, munyori wenziyo aifanira kubatanidza basa nemimhanzi kuti azvichengetedze. Pamasikati, J Cole akashanda semushambadzi wekutengesa mune imwe kambani yekutengesa, uye mushure mezuva rinonetesa, achishanda pamimhanzi yake usiku.
Nenguva yakafanira, husiku hwekusarara hunobhadhara sezvo mixtape yake yekutanga yakagadzirira. Akauya nesarudzo yekupa demo tepi kuchifananidzo chake, Jay-Z. Mushure mekupedza mazuva akawanda kunze kwehofisi yaJay-Z, J. Cole akazosangana naye.
Vhidhiyo iri pazasi inorondedzera chiitiko, wanga usiri musangano wekutanga unofadza. Mukupfupisa, ngano yemimhanzi yakafuratira J. Cole pasinei nekumirira mumvura.
Ndichiri Basking mumhedzisiro inoodza mwoyo yemusangano nemuimbi waainamata, rombo rakanaka rakapenya paJ Cole mavhiki gare gare. Akagamuchira kudanwa neshoko rinofadza rokuti Jay-Z akafadzwa nerwiyo rwake rwedemo "Lights Please".
Kunze kwenhau dzinonakidza, J. Cole akava muimbi wekutanga kuwana rekodhi rekodhi naJay-Z's Roc Nation.
Kupfuurirazve, akaratidzira mualbum rake remurairidzi "The Blueprint 3" ne track "A Star Is Born", padivi pevaimbi vakaita se. Rihanna, Kanye West, Drake.
Jay-Z's Blueprint 3 Album ine Incredible Catalog yeArtist. Unogona Kuona Izvo zvaJ. Cole?
Rwendo rwekutanga rwaJ. Cole nerwiyo rwakaratidzwa rwaishamisa zvikuru. Iwe unobvumirana nesu nekuva neruzivo rwekutanga pazasi. Zvechokwadi, nyeredzi yakazvarwa munyika yemimhanzi.
J. Cole Biography - Nyaya yekubudirira:
Nekuonekwa pakushanya kwaJay-Z, Nyeredzi yechidiki yaive nezvakati wandei pamaarubhamu evamwe vaimbi, anofarira Whiz Khalifa, DJ Khaled. Maalbum aJ Cole akaenderera mberi achikwira machati emimhanzi, achitokwikwidza nengano Kanye West.
Muchidimbu, maererano neUniversal Music Group (UMG) stats, muna 2020, J. Cole ndiye aive Munyori Mukuru Wenziyo muUS. Iine rekodhi inokwira yezvitupa makumi maviri nerimwe, zvinosanganisira Goridhe, Multi-Platinum uye Grammy.
Kunyanya, mazhinji eSitifiketi akahwinwa naJ Cole aive asina maficha uye kubatana. Tarisai kuunganidzwa kwemubairo waJ. Cole pamwe chete na21 Savage.
Collage yeMawandu akawanda Akahwinwa naJ. Cole muIndasitiri yeMimhanzi.
Panguva yekunyora biography yaJ. Cole, mukomana uyu ari pakati pevaimbi vanodiwa zvikuru veGrammy Winning rap. Mwana anga ari beatmaker ava Hitmaker muindasitiri yemimhanzi. Zvimwe zvacho, vanoti inhoroondo.
J Cole akaroora here? -Kubvunza nezve Mukadzi wake, Vana:
Nenguva isipi, Hupenyu hunotipa nyaradzo yekuporesa kune ese maronda uye maronda kubva mukuomarara nekunetseka kwatinosangana nako zuva rega rega. Uye naJ. Cole, yakamupa mudzimai wake akanaka, Melissa Heholt.
Mukadzi Akanaka weMugadziri weAmerica (J Cole), Mellissa Heholt.
J. Cole's Mudzimai, Melissa Heholt, akaberekwa musi we 10th waOctober 1987. Ndiye hanzvadzi huru yevakoma vake vatatu.
Melissa Heholt akapinda Arch Bishop Molloy High School uye College Education paSt. John's University.
Mushure mekoreji, Melissa Heholt akapinda mukuronga chiitiko sechinhu chekuzvivaraidza, akazochitora sebhizinesi muna 2014, achimugadzira "Statice Chiitiko."
Zvisinei, munhu ari oga. Nokudaro, mashoko pamusoro pevabereki vake nevanin'ina vake haana kuziviswa.
Melissa Heholt akasangana sei naJ Cole:
Vaviri ava vakatanga kusangana paSt. Johns University sevadzidzi mu2006. Akanga ari Executive Director weDreamville Foundation; sehumwe hukama hwese, ine matombo neminzwa, asi chaive chakamira chaive kushanda kuburikidza nazvo pamwe chete.
Melissa Heholt naJ. Cole Vanotaridzika Kuyevedza mune imwe yeNguva Dzavanoda muPati.
Iyo Tripple Proposal:
Pakupedzisira, J. Cole akaronga kuna Melissa Heholt katatu; Kutanga, muna 2010 asina mhete, chechipiri akamupfimba kuburikidza ne Twitter, uye chirevo chekupedzisira chaiva neine-carat diamond ring. Nekuda kwekukwira kwake uye kufa kubva 2006 kusvika parizvino.
Zvechokwadi, kuroorwa kunoridza mabhero emuchato. Kugadzirira kunotanga nekutenga bridal, iyo mwenga achava Melissa ari kuita mumufananidzo.
Muroora-ave-Melissa Heholt Kutenga Kwemuchato Wechipfeko La Fryday.
Kunyange zvazvo muchato wacho waiva mhemberero yepedyo naJ. Cole nemwenga wake chete (Melissa Heholt) vaivapo, takanga tine chivimbo kuti chaiva chiitiko chakanaka. Mushure mezvose, michato inogara iri chinhu chinofadza.
Vana vaJ Cole:
Mushure mewanano yavo muna 2015, mubatanidzwa wavo wakakomborerwa nevakomana vaviri. J. Cole akanyatsoburitsa pamuviri pemukadzi wake wechipiri muDreamville Album, ine zita rekuti "Zvibayiro." Iyo ine meseji yakavanzika.
Chinonyanya kukosha kumubereki wese ndechekuchengetedza kuchengetedzwa kwevana vavo, kunyanya munyika umo zvinangwa zvevakawanda zvinogona kukanganisa ramangwana revana. Nekudaro, hapana rekodhi rekodhi, hapana zita rekodhi revana vavo painternet.
Hupenyu hwaJ Cole:
Pane humwe hupenyu here kune uyu muimbi wechidiki anoridza rekodhi kure nedariro, achisvetuka nemufaro kuvatsigiri vake uye achivazadza nenziyo dzerap? Zvakanaka, kubva mukutsvagisa kwedu kwakanyanya, mhinduro ndeye mhedziso YES !!!!
Mugadziri ari munyika yeindasitiri yeMovie. Zvinoita sekunge J. Cole ave kuda kubatanidza nyika dzevaraidzo. Heano mamwe eTV anoratidzwa pasi apa;
Mugwagwa weKudzokera Kumba (2015),
Forest Hills Drive: Kuuya Kumba (2015),
Eyez (2016), J. Cole nezvimwewo
Mwana akarerwa naamai vasina murume (Kay Cole) anodzosera kunzanga. J. Cole anogadza Dreamville Foundation kubatsira vanaamai vasina murume pasina rubatsiro. Inotenga zvakare imba yehucheche mumakomo emasango uye inopa makore maviri emahara emahara yevanaamai.
J Cole Dreamville Foundation mune imwe yeMahara Chipo Chikoro Pack kune Vana.
Iyo Nheyo zvakare ine bhuku kirabhu yevarume nevatsigiri pakupera kwevhiki yeDreamville uye zuva rebasa revagari venharaunda yeFayetteville. Kusiyana neizvi, Zuva reMai Brunch revakadzi rinosanganisirawo.
J Cole's Hobby:
Kunze kwebasa rake rekuita uye basa rekutanga, munyori wenziyo ari zvakare mubasketball. Semwana uye achiri kuyaruka, J Cole akatamba mutambo wacho kuti asununguke kubva mukutambudzika, uye zvechokwadi anotaridzika achifara mumufananidzo uri pazasi.
J. Cole Akashandisa Basketball Kuti Asunungure Kubva Munzvimbo Yake uye Matambudziko MuMatanho Ake Akasiyana Ekukura.
Sezvineiwo, kukura hakuna kubvisa tarenda rebasketball. Asi, J. Cole akazviendesa kunzvimbo yepamusoro.
Munguva yeKoreji, mugadziri wemimhanzi aive pakati pevatambi gumi vekufona-shure mukati megore rake rechipiri. Uye pachikuva, chipfeko chake chinofanira kusanganisira Jersey.
Catalog yaJ. Cole muJersey Attire yake paStage, Inotaridzika chaizvo.
Musi wa10 Chivabvu 2021, J. Cole akasimbisa kondirakiti yemitambo mitatu neRwanda-based Patriots Basketball African League.
Pamusoro pezvo, aive zvakare muimbi wekutanga pachivharo cheAmerican Basketball Magazine SLAM.
J. Cole paFrontPage Slam Magazine uye muPatriot Team muRwanda.
Mukupfupisa, J. Cole akaita mutambo unofadza mumutambo wake wekutanga uchipikisa Rivers Stoopers.
Pakazara, mumitambo yake mitatu, akanwisa mapoinzi mashanu uye aine vatatu vanobatsira. Pazasi pevhidhiyo clip inoratidza muimbi com basketball mutambi ari kuita mudare.
J Cole- Mararamiro:
Pamwe chete, J. Cole anopedza nguva ari oga, izvo zvinotsanangura kuvanzika kwemhuri yake.
Nehurongwa hwekubatikana, anofarira kushandisa chero nguva shoma nemhuri yake kumba. Asi nguva pfupi yadarika, anga achiedza kubuda munzvimbo yake yekunyaradza nekubuda.
Sarudzo yezororo yemuimbi yaive yekufamba muMaui. Kukwira makomo chimwe chinhu J. Cole aisawanzoita, asi akatsanangura chiitiko ichi sechinoshamisa.
Muchidimbu, iyo Waterfall, sango nemichero yaro yekunze yakamuswededza pedyo nemasikirwo.
J. Cole paRwendo rwake rweKufamba muMaui, Akamira Akanaka Pakati Pepakati peMai Masikirwo.
J Cole Mota:
Pamwe chete, munhu haakwanisi kubatanidza hunhu hwomunhu kune zvaanoda. Ichi chinyorwa chinotamba zvakanaka muHupenyu hweanonyanya rapper.
Semunhu anozivisa, kuravira kwaJ. Cole kwezvinhu zvakanaka hakusi kwakaderera, kwakajeka mune yake SUV Bentley Bentayga.
J. Cole anoyemura motokari sezvaanoishandisa kakawanda panzendo dzakawanda dziri kunze kwemugwagwa. Pamusoro pezvo, akaishandisa muvhidhiyo yake yenziyo, Middle Child.
Iko kukosha kweBentley Bentayga kunodarika zana nemakumi mashanu nematanhatu zviuru zvemadhora (156,000).
Uine izvi mupfungwa, Inopa kuita kwakashata uye kushamisira, pamwe nekuona kwayo munzira kurova pfungwa.
J Cole Biography - Networth:
The Half-German, J. Cole ane zvibvumirano zvakasiyana kubva kuPuma, Nike nemamwe mabhizinesi (TV Shows). Zvichipfupikiswa pamwe chete nekutengesa kwakashata kwenziyo dzake, J. Cole akakodzera mari yakawanda.
Naizvozvo, Kumira pachiremera Celebrity Magazine, mambure emuimbi ari pamakumi matanhatu Mamirioni Madhora ($60 miriyoni) - 2021 stats. Kukosha kwake kunoita kuti ave mumwe wevatambi vanobhadhara zvakanyanya pasi rose.
J Cole Hupenyu hweMhuri:
Nhoroondo yehupenyu hwemunhu inenge isina kukwana pasina vanhu vaakakura navo uye vakanamatirana mumatambudziko ehupenyu. Kureva kuti, mune inonakidza bio yaJ. Cole, isu hatisi kuzobvisa mhuri yaanonyanya kuda.:
Nguva Yemhuri YevaCole uye Shamwari.
Nezve Baba vaJ Cole:
Baba veAmerican Celebrity yanga isiri chikamu chehupenyu hwake. Nepaunogona napo pose, maziso omucheche ane mwedzi misere anogona kunge asina chaanoyeuka. Nehurombo, hapana foto yezvinoita baba vaJ Cole.
Asati asipo, Sr Cole akashanda seUto muFrankfurt, West Germany, zvino yava United States. Zvisinei, mashoko pamusoro pehupenyu hwababa vaJ. Cole mushure mokunge aenda haazivikanwi.
Nezve Amai vaJ Cole - Kay Cole:
Mukupesana, pasinei nemamiriro ezvinhu, amai havambosiyi mwana wavo. Kay Cole akaridza chokwadi kumashoko iwayo. Pakarepo, Ndiye dombo chairo muimbi akamira paari kuti akunde.
Zvichakadaro, J. Cole anogara achimushamisira uye anomuratidza rudo rwemwanakomana anoonga kuna Amai vake kunyange zvazvo akaroora. Pose paanenge aine chiitiko, J. Cole anogara aina Amai vake (Kay Cole).
Kay Cole Anotaridzika Akanaka NeMwanakomana wake muChiitiko cheGrammy Awards.
Shasha yakagadzira rwiyo rwaamai vake kujairira kubatsira vamwe vanaamai vega vachipfuura nenzira imwechete yekukudza Kay Cole uye nezvaakatarisana nazvo achirera vakomana vake. Nokufamba kwenguva, akafara chaizvo.
Zvimwe Nezve Mukoma waJ Cole: Zach
Chero bedzi kune mukoma, mukoma mukuru ari pamusoro pemutsara wekuzvarwa. Kuna J Cole, mukoma wake mukuru ndiZach. Ane makore matatu mukuru pane mutambi.
Mufananidzo usingawanzoitiki weVakura Cole Brothers.
Zvakare, kunze kweropa, vanun'una (J Cole naZach) vane kufanana. Sezvinongoita muimbi weHip hop anoda kuvanzika, mukoma wake anoitora kune yakakwirira. Kunyangwe kutsvagisa kwakanyanya, hapana rumwe ruzivo nezve Zach Cole painternet.
Pamusoro pehama yaJ Cole:
Sekuru vaamai vaJ. Cole ndiWilliam Thomas Parkinson, mwanakomana waFloyd A. Parkinson naAnne Lofthus. Kwakabva Sir William kuMichigan, United States. Hatina mufananidzo, kutaura zvazviri, hapana mamwe mashoko pamusoro pake.
Nepo mbuya vaJ Cole vachibereka Helen Joanne Hester, mwanasikana waEdwin Hester naMarie Wood. Nenzira imwecheteyo, anewo nzvimbo yake yekuzvarwa kuMichigan, USA
J. Cole Untold Chokwadi:
Zvose mune zvose, pasinei nokuti mumwe wevanonyanya kuridza rap muHollywood Media ane nziyo dzinofadza kune vateereri vake, pane zvinhu zvishomanana zvinofadza pamusoro paJ. Cole.
Chokwadi #1 - Yapfuura Nickname:
Rapper asati agara zvachose nezita rake remadunhurirwa, aive nezita rekuti "Therapist." J. Cole akazorichinja nokuti vakaridudzira zvisizvo se“Mubhinya.” Sezviri pachena, Hapana anoda kuva mubati chibharo kana kuti kubatanidzwa naye.
Chokwadi #2 – Africa Concert:
Sezvakacherechedzwa, makoniti emuimbi akasarudzwa neGrammy anowanzo kuve muUnited States of America. Zvakadaro, akaita muBig Brother Africa Seventh Season musi wa12 Chivabvu 2016 pamwe chete nevatambi vemuAfrica.
Iyi vhidhiyo inonakidza pazasi inoratidza kusiyana kwaJ. Cole mukuita kwedariro. Sezvineiwo, hazvichinje zvisinei nenzvimbo yake yechikuva, mungave muAfrica kana muUnited States of America.
Chokwadi #3 - J Cole Chitendero:
Kutanga, J. Cole anonyanya kuratidza tsika pane mwenje wechitendero. Zvisinei, tichitarisa kubva munziyo dzake uye pfungwa dzakawanda dzaakataura papodcast, muimbi uyu muKristu uye anoratidza kufarira ukama hwake naMwari.
Tafura iyi inoratidza ruzivo rupfupi nezve J. Cole.
Zita rizere: Jermaine Lamarr Cole
Zita rekudanwa: J Cole
Zuva rekuzvarwa: 28 Zuva raJanuary 1985
Nzvimbo yekuzvarirwa: Frankfurt, West Germany
Basa: Munyori wenziyo, Rekodhi Mugadziri uye Muimbi
Interscope Records, uye Columbia Records
Mabasa Akabatana: Jay- Z, Rihanna, Drake, Kanye West, 21 Savage, DJ Khaled, Whiz Khalifa, Young Chris, Diddy
Amai: Kay Cole
Hanzvadzi konama: Zach Cole
Mukadzi: Mellissa Heholt
Hobbies: Kugara Mumba
Muchidimbu chebiography yaJ. Cole, Tinovimba nemoyo wese kuti wakanakidzwa netsanangudzo yemuimbi uyu akasarudzwa paGrammy.
Kupfuura zvose, kukunda kwake kunopa vateereri kuravidza mbishi kwemimhanzi yake yerap, kubva pamavambo ake akazvininipisa kusvika kukusingaperi. Nerutsigiro kubva kumhuri yaJ Cole, rapper akawana budiriro.
Amai vaJ Cole (Kay Cole) vanogadza muenzaniso kune vanaamai vasina varume. Pamusoro pezvo, Vana vanofanirwa kupihwa mukana wese wekuita kuti zviroto zvavo zvibude. Nechikonzero ichi, J. Cole akazvigadzirira ngano uye nzira.
Isu tinoedza kururamisa uye kururamisa tichikuendesa iwe iyo Nhoroondo yeAmerican Singers. Uine izvi mupfungwa, Ndokumbira tizivise (kuburikidza nepeji rekutaura) kana iwe ukaona chero ruzivo rusingataridzike muBio ino.